Nhau - Kurume 8, 2017 Bestway oilfield Inc.
Noushamwari VaGus.Dwairy, mukuru weBESTWAY OILFIELD INC., US, akatungamira nhume kushanyira CEPAI.
Musi waKurume 8, 2017, mukuru weBESTWAY OILFIELD INC., VaGus Dwairy, VaRonny.Dwairy naVa Li Lianggen vakauya kuCepai kushanya nekuferefeta kuzokurukura nezve marongero epetroleum michina zvigadzirwa mu2017.
Muna 2017, vose peturu michina indasitiri bloomed. Mushure meChinese Nyowani Mutambo Wegore, huwandu hwezvipfuyo uye zvekunze zvigadzirwa zvigadzirwa zvaiwedzera. Kambani yedu yakawedzera kuedza kwekutsvaga uye yakatora huwandu hwakawanda hwevashandi vekugadzira michina, iyo yakaisa hwaro hwakasimba hwehunhu uye huwandu hwakavimbiswa kuendeswa kwemirairo muna2017.
Bestway Oilfield Inc. yeUnited States yakanyatsoongorora pane kugadzirwa, kuyedzwa, michina yegungano uye nharaunda yekugadzira yekambani yedu.Vaiyedzawo kuwana rumwe ruzivo rwekunzwisisa maitiro ehurongwa hwekambani yedu. Vakarumbidza zvikuru kugona kwekambani yedu kugona uye manejimendi danho. Vakaratidza kuvimba kwavo muzvigadzirwa zvakapihwa naCepai, uye ivo vari kuda kuita mirairo yakawanda kuna Cepai.
Isu takatsunga kuita kumwe kuyedza muna 2017 uye kuita kuti kutengesa kuburike itsva nyowani!